August Njem nke Zhangjiajie - Changsha Santech Materials Co., Ltd.
August Njem nke Zhangjiajie
Oge: 2015-08-25 Hits:
On 22 na 23 August, a doro anya na ụbọchị na brisk ikuku mgbụsị akwụkwọ; usọrọ a ọma ẹkụre July lekwasịrị, zuru ike n'uche na enyere ahụ na-agbake site na a busyness, ma mejuputa gaa Zhangjiajie maka ije, anyị Santech steepụ n'ime Zhangjiajie National Forest Park mgbe agbago n'elu Ugwu Tianman site na touring ropeway.
Ụbọchị mbụ, anyị bulie Zhangjiajie National Forest Park ụkwụ, nke a maara maka ya pụrụ iche n'elu ugwu ugwu, miri ndagwurugwu na greenery n'ọhịa. The mara mma sceneries na okpu ogige dị ka "puku atọ ọnụ ọnụ, na narị asatọ kilomita nke mmiri dị ọcha".
Ọ dịtụwo mgbe ị nwetara obi ụtọ nke na-efe efe n'elu n'ígwé ojii nke cableway ogologo na 7454m na 1277m elu dị iche?
Guzo na ebe n'etiti obodo mkpọda nke ruo 37 degrees, ụkọ n'ụwa, bụ obodo mkpọda kasị ropeway, kamakwa mgbodo ruo ropeway, ya mere, ọ na-enye mkpụrụ obi-akpali akpali mmetụta nke ọkụ nke elu-igwe.
Ọzọ na-akpali akpali ebe, iko skywalk jikọrọ abụọ abụọ 60 mita nke a 2-km loop gbara ndị kwụ ọtọ ọnụ ọnụ ugwu Tianmen Mountain. Anyị na-aga site na ya na-enwe mmasị na-agaghị echefu echefu oge nke ụbọchị nke abụọ. Ọ na-adị ka gị kpọgidere na midair igwe mgbe na-ewere onye ọ bụla nzọụkwụ, enweghị ihe ọ bụla na-akwado ọbụbụeze n'ụkwụ gị.
Site na nke a na njem, anyị abụghị naanị ụtọ mara mma Zhangjiajie nlegharị anya nke ndị dị elu n'ebe ah u, miri ndagwurugwu, gurgling iyi na mara mma osisi, nwekwara welie nghọta nke ọ bụla ọzọ na sublimate Santech omenala \_ 'ike n'ezi \_', \_ 'Ịrụkọ Ọrụ Ọnụ \_', \_ 'Niile na-amakụ \_'.
LAGHACHI:Six ọrụ ibe gaa n'elu ụlọ nke ụwa -Tibet
OSOTE Ọ dịghị onye